Shirkad u istaagtay in ay ganacsi & shaqo u abuurto soomaalida Sweden – Somaliska
Mowduuc ku darso
Af-Soomaali / iidheh / Shaqada & Ganacsiga
Shirkad u istaagtay in ay ganacsi & shaqo u abuurto soomaalida Sweden
Maanta waxaa farxad ii ah in aan idin soo bandhigo warbixin ku saabsan shirkada cusub ee ISKASHI AB. Waa shirkad loo aasaasay in ay kor u qaato magaca Soomaalida Sweden taasoo loo marayo dhaqdhaqaaq ganacsi, shaqo abuuris iyo iskaashi bulsho.
Waa maxay sababta ay Soomaalida Sweden ugu liitaan ganacsiga? Su'aashaan waa mid soo noqnoqtay balse jawaabteeda ay fududahay. 1. Waa dhaqaale la'aan, 2. Waa sharciga wadanka Sweden oo aysan fahmin ama ku adag 3. waa aqoon la'aan iyo iskaashi la'aan ka dhex jirta Soomaalida dhexdeeda. Wadamada maraykanka iyo UK Soomaalidu waxay horumar ganacsi uga sameeyeen iyaga ayaa macaamiil isku ah iyo abuurista ganacsiga oo ka fudud Sweden, balse halkaan kuma noola Soomaali sidaa u fara badan.
ISKASHI AB waa shirkad doonaysa in Soomaalidu ay gaadho isku filaasho. Maadaama dhibaatada ugu weyn ee Soomaalida ka haysata abuurista ganacsiga Sweden ay tahay dhaqaale la’aan ayay shirkada ISKASHI AB soo bandhigtay qorshe ay soomaalidu sheer ugu darsan karaan shirkada.
Shirkada ISKASHI AB waa shirkad ay si wada jir ah u abuureen 5 xubnood oo ka kooban sadex Soomaali ah iyo labo Swedish ah. Xubnaha abuuray shirkada ISKASHI AB ayaa ah kuwo magac ku leh bulshada isla markaana ah dad ganacsato ah.
Shirkada ISKASHI AB ayaa qorsheynaysa in ay abuurto ganacsiyo kala duwan oo ujeedadu tahay in lagu abuuro fursado shaqo iyo in kor loogu qaado magaca Soomaalida. ISKASHI AB ayaa abuuri doonta ganacsiyo ay maamusho shirkada iyo kuwo madax banaan oo loo abuurayo Soomaalida kale ee shirkada sheerka ku leh, kuwaasoo soo bandhiga rabitaanka iyo fikradaha waxtarka leh. ISKASHI AB ayaa sidoo kale qorshaynaysa in ay fududayso xiriirka ganacsiga ee dhex mari doonaa wadamada Sweden iyo Somalia.
ISKASHI AB ayaa ku haminaysa in ay shaqo u abuurto Soomaalida sheerka ku leh shirkada. Hamiga labaad ayaa ah in shirkadu ay abuurto ganacsiyo muuqda oo magac u keeni kara bulshada Soomaalida. Hamiga sadexaad ayaa ah in dadka shirkada sheerka ku darsaday ay faa’iido uga soo noqoto maalgashigooda.
Shirkada ISKASHI AB waa mid doonaysa in Soomaalidu ka baxdo magac xumada u taala Sweden, oo ay uga baxdo horumar ganacsi, shaqo abuuris, maalgashi iyo wada shaqeyn.
Maamulka shirkada ISKASHI AB ayaa bandhigyo ku qaban doono dhowr magaalo iyagoo faahfaahin doona qaabka looga mid noqon karo shirkada iyo fursadaha ay abuuri doonto. Magaalooyinkaas waxaa ka mid ah Stockholm, Örebro, Fagersta, Växjö, Västerås iyo kuwa kale. Wixii faahfaahin dheeri ah iyo sida aad uga mid noqon karto milkiilayaasha shirkada waxaad ka heli kartaa bogga ISKASHI.se
F.G: Waxaan ka mid ahay agaasimayaasha shirkada ISKASHI AB. Maanta waxaa farxad ii ah in aan idin soo bandhigo warbixin ku saabsan shirkada cusub ee ISKASHI AB. Waa shirkad loo aasaasay in ay kor u qaato magaca Soomaalida Sweden taasoo loo marayo dhaqdhaqaaq ganacsi, shaqo abuuris iyo iskaashi bulsho.
Waa maxay sababta ay Soomaalida Sweden ugu liitaan ganacsiga? Su’aashaan waa mid soo noqnoqtay balse jawaabteeda ay fududahay. 1. Waa dhaqaale la’aan, 2. Waa sharciga wadanka Sweden oo aysan fahmin ama ku adag 3. waa aqoon la’aan iyo iskaashi la’aan ka dhex jirta Soomaalida dhexdeeda. Wadamada maraykanka iyo UK Soomaalidu waxay horumar ganacsi uga sameeyeen iyaga ayaa macaamiil isku ah iyo abuurista ganacsiga oo ka fudud Sweden, balse halkaan kuma noola Soomaali sidaa u fara badan.
F.G: Waxaan ka mid ahay agaasimayaasha shirkada ISKASHI AB. Faafi mowduucaan	Jimcale
dalmar says:	September 11, 2012 at 15:56	waxan filaya ganacsi abuurku inuka yahay afka easy
asli says:	September 11, 2012 at 16:16	somali swedan kama xumaha kuwa wadamada kale ka shaqeesta ee wadanka baan laga sameenkarin
wiilwaal says:	September 11, 2012 at 16:21	walahi waa wax lagu farxo,anio wadankan ga qaas ahaan waxa ku howlanahay inaan ka furo shirkad ganacsi wadankaan sweden insha allah
ayub says:	September 11, 2012 at 21:00	sxb jimcaale wallhi waan dhaarataye aniga oo aan akhrin ” agaasime ayaan ahay ”ayaan dareemay qaabka aad artikel ka u soo qortay in aad ka mid tahay iskaashi ,,, sxb mawduucyo fiican ayaa soo qortaa , lakiin si saxafinimo ku jirto uma soo qortid ,,, waxaad u soo qortaa si in aad fariin direysid ,,,, marka sxb waa muhiim in aad saxaafada wax ka baratid ama sii kororsatid aqoonta aad u leedahay ” muhiim ma ahan in aad noo sheegtid in aad agaasime ka tahay” adigana qiimahaaga ayay hoos u rideysaa in aad dhahdid aniga sidaas ayaan ahay,,,, hadelkeygaan yaan loo qaadan in aan jimcaale lid ku ahay!!
runta ka hadal says:	September 11, 2012 at 21:09	sxb adiga hadaad saxaafada wax ka taqaanid bal u kac dadkaaga oo jimcaale soo kuma dhaamo adoo saxafi ah ileyn adiga shacabkaad ka dhalatay war waad usoo tabin la dahay na daa niyoow jimcaale taageer hadaad la talineesid na si gaar ula tali mooyee meeshaan cml ma ahan tan labaad adiga agaasime maxaad uga noqon weesay halka uu isaga ka noqday any way sxb jimcaale aniga in badan waan mucaaradaa lkn shaqadiisa kuma fara gashti jimcaale halkaa ka sii wad hoosha aad inoo heesid somalidaan qariban ee maseersan ha u joojon sxb
Jimcale says:	September 11, 2012 at 21:13	Ayuub sxb waxaad u malaysaa halkaa in wax kaa qaldan yihiin. Sharciga saxaafada ayaa qaba in qofku uu cadeeyo haddii uu arin uu moowduuc ka qoray uu lug ku leeyahay. Sidaa darteed ayaan u qoray in aan ka mid ahay maamulka shirkada. ee ma ahan in aan is amaanayo iwm.
F.M says:	September 11, 2012 at 21:43	In wax kastaba la iska mucaarado oo wax laga sheego dhaqan fiican maahan shirkadaas ayaa jirta ayuu ku yiri waxna waa ka ahay taas ma dhib baad u aragtaa mise saxafiga sharci u diidayaad aragtay in uu xirfad kale ku shaqeyn karo. my Ayubow walaal.
runta ka hadal says:	September 11, 2012 at 21:03	marka hore mahadsanid jimcaale marka xigta aniga sweden 2 sano ayaan joogaa iminkana dugsi sare baan dhigtaa nolasheeydana waa heer sare hamigeegana waa in aan noqdaa ganacsade runti aniga meesha aan ka joogo sweden simali maba degna waxaan u doortayna waa wax barasho darteed waayo anoo dugsi sare 1 sano iga harsan tahay ayaan dalkeeygi ka soo tagay hamigeegana ma ahan in aan ka tanaasulo nasiib wanaah 2 sanoo juhdi fara badan hada dugsi sare helay mustaqbal ka dhaw na waxaan rajeynaa markaam dhameeyo wax barashada in aan somalida sadanka kani sweden sumcadooda u soo celiyo any way waan ku faraxsanahay ISKAASHI AB waxaan leeyahay soomaaliuee u istaaga sumcadiina intaad jaaliyadahaan faraha badan ee halki mahalaba ilaa 20 ka fureesan mideeya oo hal ka dhiga ileyn gacmo wada jir bee wax ku gooyaanee asc
mandeeq says:	September 11, 2012 at 22:20	somalia ayada ayaa mucad isku ah ki mantay wax barto oo shacabkaa usoo guudbiyo sida ay wax udheceen waa kan waa laga hor imanaa qarar miyaa mise aqoonti ayaa sidaa kanoqotay markaa sxb qararka iskaa daaya iyo mucaradka shacabka wuxu qaabo laa qaybso
ayub says:	September 11, 2012 at 23:10	Fikradaada dhiibo micnaheedu waxaa waaye in aan dameer dhaan raac la noqon la noqon, marka idinka iinma jawaabayo sababtoo ah wax fikir ah ma lihidin waa indha xirantihiin,, ,,,,,, waxaan aad ugu hanbalyeenayaa qofkaas somaliga ah oo isagoo labo sano joogo dugsi sare dhiganaya oo hamiga leh ,,, lycka till!! ,,,, jimcaale sxb khalad ma ahan hadalkeygu , walina ma arag meel ay ku qorantahay , saxafi intuu war soo qorey dhahaya ana i ogaada waan ku jiraaye,, shirkada iskaashi iyo medlemar keeda waxaa wanaagsan in aan ka ogaano web keeda…
saredo1 says:	September 11, 2012 at 23:13	Jacaylka
miski says:	September 12, 2012 at 00:07	wadankaan yaa far qaadi kara hada ka hor aan sanbuus dubney iyo xoogaa dhar ah aan gadaynay hanleegarka aa noo yeertey waxay tiri soo cuna lacagta aad haysataan,
somaalidhaba says:	September 12, 2012 at 10:57	NINBA DAHAB LUMAY SI U DOONDOON
Geedi says:	September 12, 2012 at 20:35	somalidu swedishka way ka badisaa ganaciga lkn ma muuqato fursad ganacsi waayo waa wadan yar oo 4 dukaan ku xiran mana joogaan somali badan oo wax kala gadan kara marka waxaan qabaa waa arin layaab leh in sweden qof shaqo ka abuuro.
mj says:	September 12, 2012 at 22:09	wadankaan shaqo iyo ganacsi la, abuuri sidii mawaxey usahla, natay sida eey usahlanatay in wabsaad laiska furto ookale , ama dadka akhristo wabsadkaan aa la, arkay in eey dad wada haye ama yes wada ah in aay yihiin ,khiyaaliga xadka wuu dhafay
duceysane says:	September 26, 2012 at 20:24	asc dhamaan waxaan dhihi lahaa shirkadan la sheegayo runyii swedhan waa taqaaniin maalin walba shirkadahoodaan maqalnaa way kacday marka soomaalida lacagta u dhiibanaysa shikadan oo faaiido ka sugaysa yey tahay. waxaan dhihi lahaa dadka lacagta ha ka qasaarinina.aniga fikir ayaan hayaa ha sameeyaan shirkad shaqo oo wax soo saar leh sida warshad soomaalidana ay shaqo ka helaan laakiin lacag igu soo darso ma soconayso
SOO DEGSO APP-KEENA!
Haddi aad leedahay Android mobile sida Samsung